တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း « MMWeather Information BLOG
One comment Uncategorized အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR – အိုကီနာဝါကျွန်းအား စ ၍ တိုက်ခတ်နေပြီ
Leaveacomment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SANVU-03W update
By mmweather.ygn, on May 25th, 2012%
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ဂျပန်နိုင်ငံပိုင် IWO TO (TO CHICHI JIMA) ကျွန်းအနီးမှ ကပ်၍ ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်စဉ် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၉၀ မှ ၁၁၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းသည် မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၀ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ပေ ၃၀ အထိရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မုန်တိုင်းအရွယ်အစား အချင်း မိုင် ၄၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
03W SANVU 25 . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SANVU-03W update
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း PAKHAR အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း PAKHAR ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာပြီ
By mmweather.ygn, on March 30th, 2012%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း PAKHAR(02W) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် မတ်လ ၃၀ ရက် နံန့် ၆ နာရီခွဲ တွင် ရရှိသည့် NRL data များ အရ – တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်း စီးတီး အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၃၀ ခန့်အကွာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR သည် လာမည့် ၄၈ နာရီအတွင်း၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ဧပြီလ ၁ ရက် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း PAKHAR ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာပြီ
3 comments Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်လာပြီ
By mmweather.ygn, on October 1st, 2011%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE က တော့ ဖိလစ်ပိုင်ကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဝင်ရောက်လာပါပြီ၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး အင်္ဂါနေ့ (၄-၁ဝ-၁၁) နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲပိုင်းလောက်မှာ ဟိုင်နန်ကျွန်းတောင်ဘက်က ကပ်ဖြတ်ကာ ဗီယက်နန် အလယ်ပိုင်းကမ်းခြေတစ်နေရာမှ ကုန်းတွင်းကို ဝင်ရောက်မယ်လို့ Typhoon2000 မှ လောလောဆယ် ခန့်မှန်းထားပါတယ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ(ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် 8PM) မှာ ရတဲ့ data အရ NALGAE ဟာ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ကို ရောက်ရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။
22W NALGAE – 01 Oct 2011 1200Z Location: 16.1 . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်လာပြီ
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်လာဦးမည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပေါ်မှာ အားပိုကောင်းလာနေတဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE ဟာ အနောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၂၄ ကီလိုမီတာ(တစ်နာရီကို ၁၅ မိုင်နှုန်းခန့်) နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဆီကို ဦးတည်ပြီး ဆက်လက် ရွေ့လျားနေပါတယ်။
၃ဝ-၉-၁၁ နေ့(သောကြာနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် ၄ နာရီ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာ မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၅ဝ-၁၈၅ ကီလိုမီတာနှုန်း(93.20 mph – 114.95 mph) ရှိနေကြောင်း၊ လာမဲ့ စနေနေ့ ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် မွန်းလွဲပိုင်းလောက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း DIVILACAN မြို့နားမှ ကုန်းတွင်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး၊ ကုန်းတွင်းကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဟာ တစ်နာရီကို ၁၈၅ ကီလိုမီတာ(တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်နှုန်းခန့်) အထိ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်လာဦးမည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NALGAE
3 comments Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
One comment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်တော့မည့် NESAT(PEDRING)
By mmweather.ygn, on September 27th, 2011%
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT(21W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် PEDRING သည် မြန်မာစံတော်ချိန် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီ ဂြိုလ်တုပုံအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စ တင်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်းအရွယ်အစားမှာ အချင်း ၉ဝ၅ ကီလိုမီတာ(၄၉ဝ နော်တီကယ်မိုင်) ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၉၅ ကီလိုမီတာမှ ၂၄ဝ ကီလိုမီတာ(တစ်နာရီ မိုင် ၁၂ဝ မှ မိုင် ၁၅ဝ) အထိရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာန Typhoon2000 ၏ အလိုအလျောက်တိုင်းတာရေးစခန်း Naga City မှ ၃၁ နာရီအတွင်း ရရှိသည့် မိုးရေချိန်စုစုပေါင်း ၂ဝ၉.၈ မီလီမီတာ(၈.၂၆ လက်မ) ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်တော့မည့် NESAT(PEDRING)